Ahoana no fomba fikarohana fidirana | Valin'ny Fanamarinana
Home Momba anay Ahoana ny fijerena ny fikarohana
Ao amin'ny The Reward Reward dia tianay ny manome ny fahazoana ny porofo ara-tsiansa farany sy manan-danja indrindra mba hanohanana ny mpamaky antsika hahatakatra ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo, ny pôrnôgrafia ary ny atidoha. Ao amin'ny fizarana Resahinay dia manome ny fehin-kevitry ny fanadihadiana ara-tsiansa izay novakianay.
Ahoana no ahafahako mamaky ireo boky fikarohana voalohany?
Misy karazana siantifika sasany amin'ny alàlan'ny fidirana malalaka ary afaka maimaim-poana. Na izany aza, ny ankamaroany dia miseho amin'ny gazetiboky navoakan'ny orinasa ara-barotra. Ny fahafahana dia voafetra amin'ny Copyright. Midika izany fa mila mandoa vola ianao. Vitsy dia vitsy no afaka manao izany. Ny ankamaroan'ny gazety dia navoaka elektronika ary azo jerena amin'ny rakitra PDF ho an'ny rindrankajy ary amin'ny lahatsoratry HTML ho an'ny Internet. Ny ankamaroan'ny singa dia misy amin'ny alàlan'ny pay-per-view.
Bilaogy maro amin'ny fianarana ambony no manoratra ny gazetiboky an-tserasera, toy ny ampahany sasany amin'ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana. Ny fifanarahana ara-dalàna dia midika fa izy ireo dia afaka manome fotsiny ny fidirana amin'ny mpianatra sy ny mpiasa voasoratra. Ny mpikambana amin'ny olon-tsotra amin'ny ankapobeny any Royaume-Uni dia mahazo fahazoana mankany amin'ny lahatsoratra navoakan'ny UK amin'ny alalan'ny Tranomboky Britanika, ny Tranombokim-pirenen'i Ekosy ary ny National Library of Wales. Ao amin'ireo tranomboky ireo dia misy ihany ny fidirana amin'ny mpitsidika. Alaharo alohan'ny hijerena raha afaka mahazo fidirana ianao alohan'ny handehananao.
Toeram-piasana tsara foana foana Fantaro ny Tranomboky Britanika.
Ny olona any Ecosse dia afaka manandrana ny Tranombokim-pirenena ao Scotland. Raha any Pays de Galles ianao, ny National Library of Wales tokony ho ny fiatoana voalohany anao.
Ny anjara asan'ny The Reward Foundation
Amin'ity tranonkala ity dia hiezaka ny hanome fahafahana miditra amin'ny faratampony na ny famintinana na fehintsoratra momba ny taratasy rehetra resahinay. Hanolotra rohy ho an'ny mpitory ihany koa izahay na ireo safidy malalaka azonao vakina. Ny drafitra dia ny hanangona ny fampahalalana fototra ary hampifandraisany amin'ny fomba izay ahafahan'ny ankamaroan'ny olona.